पुरुषका लागी खतरनाक साबित हुन्छन् यी राशिका महिलाहरु, कतै तपाई त पर्नुभएन ? | Rochak
पुरुषका लागी खतरनाक साबित हुन्छन् यी राशिका महिलाहरु, कतै तपाई त पर्नुभएन ?
June 28, 2021 NepstokLeaveaComment on पुरुषका लागी खतरनाक साबित हुन्छन् यी राशिका महिलाहरु, कतै तपाई त पर्नुभएन ?
भनिन्छ, धेरै जसो महिलाहरु शंकालु स्वभावका हुन्छन् । तर सबै महिलाहरु शंकालु हुदैनन् । केही महिलाहरु त जासुस पनि गर्ने गर्छन । यस्ता राशिहरु छन जुन एकदमै संकालु स्वभावका हुन्छन् । आउनुहोस् कुन राशिका गर्लफ्रेन्ड र श्रीमती कस्ता स्वभावका हुन्छन् जानकारी लिउँ । विशेष गरेर यी ५ राशिका महिलाहरु विशेष शंकालु हुन्छन् ।
मेष राशि – मेष राशिका भएका निकै संवेदनशील हुन्छन् । उनिहरु आफ्नो साथिलाई एकदमै बढी माया गर्छन । त्यहि माया नै उनिहरुको शंकाको कारण बन्दछ । आफ्नो साथिलाई गुमाउने डरले आफ्नो साथिको सानो सानो कुरामा शंका गर्ने गर्छन् ।
मकर राशि – मकर राशि भएका महिलाहरु आफ्नो जीवनसाथीलाइ लिएर अलि बढी सकरात्मक हुन्छन् र त्यसैले आफ्नो जीवनसाथीलाई सब भन्दा बढी ध्यान दिन्छन् । मकर राशि भएका महिलाहरुरु आफ्नो जीवनसाथीको हरेक क्रियाकलाप माथि नजर राखेका हुन्छन् ।
कर्कट राशि – कर्कट राशि भएका महिलाहरु एकदमै बढी संकालु स्वभावका हुन्छन् । हरेक समय जीवनसाथी माथि आफ्नो दृष्टि राखेकी हुन्छन् ।
धनु राशि – धनु राशिका महिलाहरु एकदमै बढी संकालु स्वभावका हुन्छन । उनिहरु आफ्नो साथिको जासुस गर्न जुनसुकै बेला पनि तत्पर रहन्छन् । श्रीमानको फोन चेक गरेर उसको सबैकुरा पत्ता लगाउने कोसिस गर्छन ।
मीन राशि – मीन राशि महिलाहरु नकरात्मक स्वभावका हुन्छन् । सधै एउटै कुराको चिन्ता लिरहन्छन् कि कतै आफ्नो जीवनसाथीले छाडेर जाने त हैन भनेर । त्यहि डरले उनिहरु शंका गर्न थाल्छन् ।
.त्यसपछि मा’ रेको श्रीमती र छोरालाई अंगालो हाल्दै रातभर सँगै सुतें
मिसेस श्रीलंकाको मञ्चमै भयो झ गडा, शिरबाटै ताज खोसिएकी उपाधि विजेता घाइते भएपछि